Home Wararka Gaas oo xabsiga ka sii daayey sarkaal ka tirsan ururka Al-Shabaab
Gaas oo xabsiga ka sii daayey sarkaal ka tirsan ururka Al-Shabaab
Madaxweynaha Puntland ayaa markii labaad xabsiga ka sii daayey Cabdirisaaq Xuseen Tahliil (Ina Calool Geel) oo ah sarkaal ka tirsan ururka Al-shabaab kadib markii maamulka gobolka oo uu hogaaminayo Gudoomiyihii hore ee degmada Galakacayo cabsi ka muujiyeen in dagaalo ka dhacayaan gobolka Mudug hadii lagu fuliyo xukunka lagu ridey.
Calool Geel oo Maxkamada ciidamada Puntland dil toogasho ah ku xukuntey ayaa xabsiga laga sii daayey isagoo lagu wareejiyey xubno ka tirsan gobolka Mudug iyo saraakiil ka socota maamulka Galmudug.
Cabdirizaq Tahliil oo ku xiraa xabsiga dhexe ee magaalada Boosaaso ayaa qaar ka tirsan ehelkiisa waxay saxaafada u sheegeen in markii la sii daayey loo dhoofiyey magaalada Muqdisho.
Sarkaalkaan ka tirsan ururka Al-shabaab oo dil toogasho ah ku xukunaa markii maamulka Puntland taladiisa uu qabtey Cabdiweli Maxamad Cali Gaas ayaa xabsiga laga sii daayey 2015 isagoo dib loo soo qabtey sanadkii 2017 kadib markii magaalada Galakacayo howlgalo ka sameyeen ciidamada Danab iyo PSF oo is-kaashanaya.
Ina Calool Geel ayaa xiligaas qayb ka ahaa howlgalo ururka Al-shabaab ka fuliyeen magaalada Galkacayo kuwasoo qaraxyo watey, waxaaana Maxakamad ciidamada Puntland ku xukuntey dil kale 11/11/2018.
Gudoomiyihii hore ee degmada Galkacayo oo laga eryey shaqada 17 Nov,2018 kadib markii Cabdiweli Gaas kala direy golihii degaanka ayaa bartiisa Facebook ku soo qorey hadal uu guul ku tilmaamey kasoo ula jeedey sii daynta sarkaalkaan ka tirsan ururka Al-Shabaab.
“Waxaan soo dhawaynayaa una hambalyeynayaa isbadalka degmada Galkacayo waxaan ku faraxsanahay caqabadii iyo cabsidii maalmahan taagnayd anigoo soo afjaray dadaal dheer kadib.” sidaas waxaa yiri Maxamud Yaasiin Tumey.
Puntland ayaa waxaa la soo gudbooonaadey amni xumo ba’an tan iyo intii uu xilka hayey Madaxweyne Gaas iyadoo kooxaha Al-Shabaab iyo Daacish ku xoogeysteen gaar ahaan gobolka Barri.
Previous articleIslamic State warns Shabaab of impending battle in Somalia
Next articleMP Ahmed Fiqi “Sahafi Hotel attack was a target to assassinate MPs”
(Daawo +Video) RW Rooble oo looga digay magacaabidda Wasaarad sharci-darro ah...